Rooble oo ku dhawaaqay inuu la wareegay Taliska Ciidamada, Farmaajo-na ka dhigay Madaxweyne Hore - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Rooble oo ku dhawaaqay inuu la wareegay Taliska Ciidamada, Farmaajo-na ka dhigay Madaxweyne Hore - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Rooble oo ku dhawaaqay inuu la wareegay Taliska Ciidamada, Farmaajo-na ka dhigay Madaxweyne Hore
Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhaqaaqay inuu la wareegay taliska ciidamada dowladda, isla markaana ay ka amar qaadan doonaan isaga iyo xafiiskiisa.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed u caddeynayaa inay xukuumadda Soomaaliya si buuxda mas’uul uga tahay dalka. Waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida inay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda iyo xafiiska Ra’iisal wasaaraha, cid kasta oo ka hor imaada amarkan waxaan si dedgega ula tiigsan doonnaa sharciga..” ayuu yiri Rooble.
Rooble ayaa sheegay in Farmaajo uu la mid yahay Musharixiinta kale, geesna uu uga istaagi doono Doorashada, wuxuuna si cad u sheegay in ujeedka Farmaajo ay ahayd inuu isagu boobo doorashada ama uu ka hortago.
Rooble oo khudbad muuqaal ah kusheegay in madaxweyne Farmaajo uu weerar ciidan ku so qaaday xafiisyada Ra’isul Wasaaraha iyo Golaha wasiirada si uu uga horjoogsado waajibaadkooda.
Waxa uu Rooble sheegay in xukuumadda Federaalka ee uu hoggaamiyo ay si buuxda mas’uul uga tahay hoggaaminta iyo hagista hay’addaha dowladda, wuxuuna faray dhammmaan ciidamada iyo taliyayaasha inay si toos ah uga amar qaataan xafiiska Ra’isul Wasaaraha.
Rooble ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya aanay ka amar qaadan karin Madaxweyne Farmaajo, oo uu sheegay inuu yahay musharrax la mid ah musharraxiinta kale ee u tartamaya xilka madaxweynaha.
Previous articleXasan Kheyre: “Farmaajo wuxuu go’aansaday inuu isku qaso Dab iyo Gaas, dalkana u jiheeyo..”
Next articleAkhriso: Khudbadii ugu kululeyd ee uu jeediyo Ra’iisal Wasaare Rooble oo Qoraal ah